Quark na-akwalite Enyemaka ngwakọ ngwakọ maka Mbipụta Azụmaahịa Gị | Martech Zone
Quark amalitela ngwa ngwa ngwakọ webata nke na-etinye ndebiri ndị ọkachamara yana sọftụwia desktọọpụ ọhụrụ, Quark na-akwalite. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị mara mma… budata ngwa ngwa Windows na ị nwere ike ịmalite edezi na bulite ihe ahịa gị.
Ozugbo ebugoro ihe gị, ịnwere ike ịme ha ma kesaa ha na mpaghara gị site na ndị na-ebipụta akwụkwọ. Ọrụ ahụ na-enye gị ohere ịmepụta kaadi nhọpụta, broshuọ, kaadị azụmaahịa, Kupọns, mpempe data, envelopu, mpempe akwụkwọ ozi, mpempe akwụkwọ ozi na postkaadị na ndebiri emepụtara nke ọma. Enwere otutu ndebiri ọkachamara na saịtị ahụ ugbua - site na Akaụntụ na ọrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ.
Quark emeghewo ọrụ ahụ onwe na-ebi akwụkwọ yana ejechi akwụkwọ na ọkachamara na-emepụta. Maka obere azụmaahịa "Mee Onwe Gị", nke a bụ azịza nke nwere ike ịchekwa nzukọ obere oge, mbọ na ego.
Anwalebeghị m ọrụ ahụ (ọ pụtara naanị Windows), mana ọ ga-atọ m ụtọ ịnụ n'aka ndị nwara ya. The online customization maqbx chekwebe na editọ m ji na-ebipụta ihe ndidi pụtara ike iji… a ngwakọ obibia nwere ike ịbụ oké ihe ngwọta ruo mgbe ngwọta online nwere ike ịchụkwudo
Tags: JavaNode.jsnyiweỊdị n'Otu
Nov 27, 2009 na 9:21 PM
enwere nnwale efu w nwere ike iji?